M/weyne Faroole iyo wafti uu hoggaaminayo oo u ambabay ka qayb-galka xafladda gooni isku taagga koonfurta Suudaan. – Radio Daljir
M/weyne Faroole iyo wafti uu hoggaaminayo oo u ambabay ka qayb-galka xafladda gooni isku taagga koonfurta Suudaan.
Luulyo 9, 2011 12:00 b 0
Garowe, July 09 ? Wafti uu hoggaaminayo m/weynaha dawladda Puntland oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golihiisa xukuumadda ayaa u kicitmay ka qayb-galka xaflad ballaaran oo lagu maamuusayo gooni isku tagga dawladda cusub ee koonfurta dalka Suudaan.
M/weynaha Puntland Cabadiraxmaan M. Maxamuud Faroole iyo waftigeesa ayaa qayb ka ah madax badan oo ka socda shanta qaaradood ee adduunka oo lagu marti-qaaday munaasabad ka dhacaysa magaalada Jubba ee caasumadda u noqonaysa dawladda koonfurta Suudaan.
Waftiga Puntland oo shalay galinkii dambe ka dhoofay garoonka diyaaraha ee magaalada Garowe ee xarunta dawladda Puntland ayaa ku sii hakaday magaalada Nairobi oo ay horay u sii joogeen xubno wasiirro ah oo qayb ka noqon doona waftiga Jubba, waxaana lagu wadaa isla maantaba in ay ka sii ambabaxaan.
Dhinaca kale madaxda Soomaalida ah ee lagu marti-qaaday ka qayb-galka xafladda gooni isku taagga koonfurta Suudaan waxaa ka mid ah M/weynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sh. Axmed oo isaga iyo wafti uu hoggaaminayaa ay u kicitimeen magaalada Jubba iyo sidoo kale wafti isna la filayo in uu ka yimaado Soomaaliland qaar ka mid ah maamullada kale ee Soomaaliya ka jira.
Dawladda cusub ee koonfurta dalka Suudaan waxay noqonaysaa dawladdii ugu dambaysay ee xornimo hanada adduunkoo dhan, waxaana ay tirada dawladaha adduunka ay ka dhigtay 193 dawladooda.
Lacago faalso ah oo lagu arkay suuqyada magaalada Galkacyo iyo Bangiga dawladda oo ka digay qaadashada lacagahaasi.
Axmed Adam Carab oo loo magacaabay Guddoomiyaha gobolka Cayn; Cumar X. Cabdi, Duqa magaalada Buuhoodle.